Dhawaan, macruufka 9 beta la sii daayay. Version beta Tani ayaa keenay qaababka badan oo la yaab leh oo cusub oo ku dhiirigelinayaan in uu sii si joogto ah u casriyeeyo. Mid ka mid ah qaababka ugu fiican waa horumar Notes. First of dhan, hadda aad ugu dambeyntii qaab karaa qoraalka geliyo Notes aad. Waxaad bedelno font size doorataa horyaalka, cinwaanka, ama jirka. Inkasta oo waxa kaliya ee aad leedahay saddex tirada font, tani waa horumar weyn. Waxaad karo, aniguna geesi, italicize oo hoosta ka xariiqay qoraalka aad.
Laakiin, waxaad noo rumaysan lahaydeen haddii aan kuu sheegay in ay jirto lagma ka sii fiican? Hadda, aad ugu dambeyntii ku dari kartaa lifaaqyada sida sawiro iyo videos. La yaabka leh, miyaanay ahayn? Marka aad Notes furo, waxaad ogaan doontaa calaamad lagu daray kor ku keyboard ah. By siyoodba icon tan, waxaad heli doontaa toolbar ah. Iyada oo taageero ka toolbar waxa aad geli kartaa sawiro, videos, liiska hubinta, oo keeno menu formatting ama xaataa inaad bilowdo sawir ah in aad note.
Laakiin, dabcan, qaladaad dhan mararka qaarkood. Aan niraahno in aad ka dhigay qoraal ah oo ku daray hal video aad u muhiim ah in aad la wadaago la asxaabtaada. Markaas, si qalad ah aad tirtirto this video ka Notes. Ha weli ma argagixin. Haddii aad weli in video ku saabsan qalab aad macruufka markaas aad si fudud u ku dari kartaa mar kale. Laakiin, haddii aadan haysan video badbaadiyey on qalab aad, ka dibna aad qabto dhibaato weyn. Ma jiro hab ay ku darto video in mar haddii aysan ka jirin ku saabsan telefoonka.
Laakiin, nasiib wanaag, maalmahan technology waa sidaas oo horumarsan in wax kasta la samayn karaa. Video Taasi waxaa lagu soo kabsaday kartaa iPhone, Lugood ama xataa iCloud iyadoo la kaashanayo software gaar ah. Ama, halkii ay ka soo kabsaday aad video, aad si fudud u soo kaban karto, note oo dhan. Software waxaa lagu magacaabaa Wondershare Dr.Fone ee macruufka.
Kabsado video tirtiray qoraalada iPhone
Wondershare Dr.Fone Xogta ugu wanaagsan ee macruufka (kabashada xogta iPhone) waxa suurto gala waa ka soo kabsado software u iPhone, iPad iyo iPod. Iyadoo software waxa aad soo kaban karto, ku dhawaad ​​file kasta oo tirtiray ka qalab macruufka ah. Iyadoo hal click, waxaad samayn kartaa kabsado xiriir la tirtiro , fariimaha qoraalka ah, sawiro, qoraalo, Deymaha maqan cod, Safari Bookmarks oo xitaa ka sii badan. Intaa waxaa dheer, Wondershare Dr.Fone kuu ogolaanaya in aad ka bogsato xogta oo dhan ka iCloud iyo Lugood. Sidaas, hadda waa mid aad u badan tahay inuu ka soo kabsado in la tirtiro video aad. Waxa ugu fiican ee ku saabsan Wondershare Dr.Fone waa in ay tahay la jaan qaada qoraalkii ugu dambeeyey ee macruufka, iyo sidoo kale la iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPad Air 2 iyo in ka badan.
Ka dib markii dhowr faylasha tirtiray laga yaabaa inaad soo gaarto tirada weyn ee files. Dabcan, ma dhici doonto inay ka soo kabsadaan oo dhan oo iyaga ka mid. Si fudud u dooran gudbiyo aad rabto in aad soo kabsado. Halkan waxa ku jira qaababka ugu muhiimsan ee Wondershare Dr.Fone ee macruufka:
Ceshano ku dhowaad nooc kasta lumay xogta ka qalab macruufka
Dooro oo aydan xaraysan aad rabto in aad soo kabsado
Scan cajiib degdeg ah
Easy in ay isticmaalaan, inaad sameyso oo dhan waa la sameeyo laba qasabno mouse
Ka Lugood ee kaabta la soo kabsado Files Wondershare Dr.Fone
1. Daahfurka Wondershare Dr.Fone ee macruufka. Markaas dooran "kabsado Lugood ee kaabta File." Ka dib markii in guji Lugood qalab gurmad soo kabashada. Qalab iskaan doonaa oo lagu ogaado oo dhan Lugood files gurmad si toos ah on your computer. Ka dib markii baaritaan lagu sameeyo, faylasha gurmad lagu soo bandhigi doonaa in uu furmo. Waxaad xaqiijin karaa taas oo gurmad ah waa mid ka mid sax ah iyagoo eegaya taariikhda la abuureen.
2. Markaas, ayaa la rejeynayaa in aad iskaan files ka gurmad ah. Dooro Lugood gurmad faylka aad is leedahay waa mid sax ah oo guji "Start Scan." Scan ayaa laga yaabaa inay qaadato dhawr daqiiqadood, taas oo ku xiran ee aad gurmad file.
3. Ka dib markii baaritaan lagu sameeyo, oo dhan waxaa ka hadha oo la sameeyo waa in ku eegaan files iyo doorto midda aad rabto in aad soo kabsado. Taariikhda All lagu soo bandhigi doonaa qaybaha. Waxaad ku eegaan kartaa file kasta oo ka hor-kabashada iyo eegista dooran kuwa aad rabto in aad soo kabsaday. Ka dib markii doorashada faylasha, riix "Ladnaansho" badhanka hoose. Haddii qalabka macruufka xiran yahay si aad u computer, dhammaan faylasha lagu soo kabsaday karaa in qalab aad si toos ah. Sidoo kale, waxaad dooran kartaa "baadh" sanduuq ee geeska sare ee xaq u leedahay inaad si fudud u heli faylasha aad.
Iyo, in ay tahay!
Ka iCloud kaabta la soo kabsado Files Wondershare Dr.Fone
1. Open Wondershare Dr.Fone ee macruufka iyo doorato habka soo kabashada soo socda "kabsado iCloud ee kaabta faylasha" dusheeda. Markaas uu furmo sida sawirka hoose ee ku saabsan in la soo bandhigi doonaa. Waxaad u baahan tahay inuu soo galo ID iCloud Apple iyo password, ka dibna gasho. Wondeshare qaadataa gaarka ah si dhab ah. Software marna hayn doonaa diiwaanka aad info account Apple ama content, wax walba oo dhaca.
2. Ka dib markii aad soo gasho si ay u galeen iCloud, software si toos ah ka heli doontaa dhammaan iCloud files gurmad oo aadna ku badbaaddeen idinka aawadiin. Dooro file gurmad aad u malaynaysid inay ku haboon iyo download it adigoo riixaya "Download" button.
Marka aad doorato in aad ka soo dejisan, daaqad cusub arbushin doonaa. Window wuxuu kuu ogolaanayaa inaad doorato oo file nooc aad rabto in aad kala soo bixi. Haddii aad raadinayso video ah, markaas waa in aad kala soo bixi videos kaliya. Sidaas idinka badbaadin doonaa, markii qaar ka mid ah. Markaas, riix "Scan" button.
3. scan ka dib dhamaato aad ku eegaan karaan dhamaan faylasha la heli karo in aad gurmad iCloud. Sida tutorial hore, waxaad dooran kartaa gudbiyo aad rabto in aad soo kabsado. By gujinaya "Ladnaansho" button waxaad dooran kartaa in lagu badbaadiyo files xulay on your computer. Ama, waxa kale oo aad dooran kartaa in aad si toos ah badbaadin xiriirada aad soo kabsaday, fariimaha, iyo qoraalada si aad qalab macruufka ah haddii ay ku xiran your computer.
Taasina waa inaad sameyso oo dhan!
Haddii aad raadinayso si ay u soo kabsadaan video in aad tirtiray ka note ah, waxaad ka raadin kartaa ama warqad u ah.
Halkan waxaa ku qoran qaar ka mid ah faalooyin oo ku saabsan version cusub ee Notes on macruufka 9:
Feature la tegtaan cabsi badan sida is barbar in macruufka 8
Waxaan ahay ayuu u faraxsan ka badan tan qoraalada app cusub. My jirka waxa ruxay sida waalan. Tani waxay mid ka mid ah barnaamijyadooda ugu weyn in Apple abid abuurtay noqon doonaa. Farax waxaa keenaya ii inay wax ka qabtaan jirka ways.my qalaad aan la shaqeynaya oo caadi ah. Way waqti aad u badan ayaa la isticmaalay musqusha. Sii daynta aan farax. Anigu garan maayo ilaa goormaan sugi karin in ay la kulmaan galkaaga app cusub! Kaliya inankeeda weyn ka jawaabi kartaa in.
Anigu ma aaminsani in ay wali u isticmaali texture wanaagsan oo linenka ah ee asalka ah. Waxa muuqata u xun.
> Resource > Ladnaansho > Video ku Notes tirtiray! Sidee inuu ka soo kabsado?